Ellicott Dredges LLC Wins Contrates ny governemanta - Ellicott Dredges Blog
Ellicott dia nandoa fifanarahana an'ny governemanta telo tany Etazonia
USA - Ellicott Dredges dia faly manambara fa nomena fifanarahana telo lehibe izy ireo tamin'ny governemanta amerikana.
Ny fifanarahana voalohany dia ho an'ny dredge sy ny fanohanana an'i Ellicott 860SL Swinging Dragon®
ho an'ny US Bureau of Reclamation (USBR). Ity dredge ity dia hampiasaina amin'ny fampitomboana ny halaliny ary hamerenany ny fikorianan'ny rano any amin'ny Reniranon'i Colorado, ary hamoronana fonenan'ny tany. Ny iray amin'ireo tanjona voalohany amin'ity programa ity dia ny fikajiana karazana maro, toy ny vorona, trondro, sokatra, bibikely ary zava-maniry.
Ellicott dia efa nanolotra dredge maro tamin'ny USBR ho an'ny tetik'asa fitantanana ny reniranon'i Colorado.
Ellicott dia namorona dredge vaovao - ny 14 ”Bay Dragon - ho an'ny Barnstable County, Massachusetts.
Ellicott's Bay Dragon Series vaovao
Ny andian-dahatsoratra Bay Dragon® dia andalana maoderina ElNotX-10 "Ellicott".
Ity dredge ity dia hampiasaina mba hitazonana ireo seranan-tsambo sy fidirana kely misy fampiasana fasika amin'ny alàlan'ny fampiasana mahasoa azy ireo mba hamerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka. Izy io dia niakatra avy ireo dingana kely Ellicott dredge, ny Series 670 lasitra iray antsoina hoe ny "lamoria trondro," izay reliably Barnstable efa niasa nandritra ny 20 taona.
Nangataka fampiasa efa namboarina i Barnstable, ao anatin'izany ny kalesin'ny spud, izay ahafahana mametraka toerana tsara kokoa ary noho izany dia ny fanamboarana tsara sy mahomby kokoa. Ankoatra izany, ny dredge dia manana tsipika sy tady mihantona, izay ahafahana manao sery mora foana. Ny dredge dia mahavita tafarina indray mandeha mivondrona, ary namboarina ho an'ny valan'i Barnstable hamela ny dredge hampidirin'ny crane fa tsy hiondrika.
Ny endri-javatra vaovao vaovao an'ny Bay Dragon Series dia ahitana:
Ny milina Tier 3 mampihomehy
Fiaran-dalamby mandeha amin'ny fifindrana an-dranomasina
Rafitra hydraulic vaovao, natao an-trano, izay mampihena ny fitrandrahana herinaratra sy ny alika eo amin'ny 10% ary mampitombo ny fahombiazan'ny fandidiana amin'ny 20%.
Ny herinaratra maoderina momba ny rafitra fanaraha-maso hidradrika amin'ny alàlan'ny Parker IQAN ho an'ny fahatokisana azy.
Ny fifehezana goavam-be mora ampiasaina napetraka ao amin'ny seza fifehezan'ny operator
Ellicott dia hanome ny paompy booster roa voatokana ho an'ny State of Ohio. Ireo
Tobin-tsambo boady Ellicott
ireo mpanentana dia ampiasaina hanohanana ny karazan-dasam-panjakana Ellicott 460SL miforitra amin'ny tohatra. Nindrana fiara automatique tsy misy hataka sy efitrano fanaraha-maso ampiasaina amin'ny dredges izy ireo.
Ny endri-javatra amin'ny paompy booster dia misy:
12 "L-36 mafy vy milina voatavo vita amin'ny liner azo zahana
Caterpillar Engine - 540 HP (400 kW), mifanentana amin'ny bio-diesel
Mifarimbona fitaovam-piadiana an-dranomasina
Tanki-mavo roa vita amin'ny rindrina
Fandrefesana sy fifehezana an-toerana eo an-toerana
Fanaraha-maso haingana sy rafitra rafitra fanaraha-maso
Ellicott no mpanome rafi-pandaminana fanodinana maoderina sy vahaolana hanatrarana ny filan'ny mpanjifany.